Rịgharịa igwefoto: Sistemụ nzuzu maka iPhone ma ọ bụ DSLR | Martech Zone
Anyị edeela banyere isi video ndekọ akụrụngwa azụmahịa ọ bụla kwesịrị ịnwe ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịdekọ vidiyo dị mma maka azụmahịa ha. Ọ bụrụ na ị hụtụla vidiyo kacha mma nke Studio, ị chọpụtala usoro egwu na dolly nke ha na-ewepụta iji nye ihe ngosi pụrụ iche, na-adị larịị.
Maka $ 99, ị nwere ike ugbu a nwere Revolve Camera Dolly usoro maka DSLR gị ma ọ bụ maka $ 139, ama gị. Nke a bụ nnukwu nnyocha ngwaahịa na ụdị agba ị ga-enwe ike ịme. Ha nwere ngwa ole na ole - ọbụlagodi usoro egwu ị nwere ike itinye na ya!
Dị ka Igwefoto gbanwere saịtị:
Revolve igwefoto dolly bụ ikpo okwu iji weghara eserese vidiyo dị mma ma dịkwa ike. Usoro ihe a nwere ike imepụta ọtụtụ nsuso nsuso dị iche iche na ịkụgharị dolly yana yana oge na-agbanwe agbanwe ma kwụsịkwa mmegharị esemokwu. Ọ dakọtara na igwefoto ọ bụla, ma dabara adaba maka iji ya na ebe ọ bụla.
Ogwe ndị a na-agbanwe agbanwe na-ekwe ka dolly na-aga n'ahịrị kwụ ọtọ, ma ọ bụ na a na-agbanwe agbanwe nke akụkụ ọ bụla. Usoro a gụnyere ihe eji eme ụgbọ okporo ígwè nke na-enye ohere iji dolly ahụ rụọ ọrụ ọ bụla iji nweta vidiyo dị ụtọ ọbụlagodi na ala siri ike. Tinye ọkpọka / mkpara nke gị iji mepụta ihe mmịfe nke ogologo ọ bụla! A na-ejigide ihe mgbochi okporo ụzọ ọ bụla iji nabata njem tripod ka ị nwee ike iji okporo ụzọ dị elu ọ bụla, ma ọ bụ mepụta ma ọ bụ jụ eserese mmịfe.